जितसंगै फ्रान्स अन्तिम आठमा, अर्जेन्टिना बाहिरियो – आफ्नो समाचार
जितसंगै फ्रान्स अन्तिम आठमा, अर्जेन्टिना बाहिरियो
Afno News — १६ असार २०७५, शनिबार २१:५७0comment
असार १६/काजान (एजेन्सी) – विश्वकप २०१८ अन्तिम १६ को पहिलो खेलमा फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई ४-३ ले हराएको छ । फ्रान्सको जितमा युवा खेलाडी किलियन एम्बाप्पेले दुई गोल गरे ।
खेलको १२ औं मिनेटमा किलियन एम्बाप्पेले डि-एरियामा पेनाल्टी जितेका थिए । सो पेनाल्टीमा एन्टोइन ग्रिजम्यान चुकेनन् र फ्रान्सलाई १-० को अग्रता दिलाए । ग्रिजम्यानले त्यसअघि फ्रि-किक मार्फत पोस्टमा पनि प्रहार गरेका थिए । तर एन्जल डि मारियाको बक्स बाहिरबाट गरिएको सुन्दर प्रहारमार्फत अर्जेन्टिना खेलमा फर्केको हो ।
पहिलो हाफ १-१ को स्कोरमा सकियो भने दोस्रो हाफ झनै रोमाञ्चक भयो । लियोनल मेस्सीको प्रहार मेर्काडोको खुट्टामा डिफ्लेक्ट हुंदै गोल परिणत भएपछि अर्जेन्टिनाले खेलमा पहिलो पटक अग्रता लिएको थियो । तर बेन्जामिन पाभार्डको आकर्षक भलि गोलमा फ्रान्सले स्कोर २-२ बनाउन सफल भयो ।
त्यस्तै खेलको ६४ औं र ६८ औं मिनेटमा एम्बाप्पेले गोल गर्दै खेल अर्जेन्टिनाको पहुंचबाट टाढा पुर्‍याएका थिए । इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा परिवर्तित खेलाडी सर्जियो अगुएरोले अर्जेन्टिनाका लागि गोल गरे पनि सो पर्याप्त हुन सकेन ।
यस जितसंगै फ्रान्स प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ । फ्रान्स समूह ‘सी’ को विजेता बन्दै अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको थियो । समूह ‘डी’ मा उपविजेता बनेको लियोनल मेस्सी सम्मिलित अर्जेन्टिना भने घर फर्किन बाध्य भएको छ ।
स्थानीय तहमा एकैपटक २० हजार कर्मचारी खटाइँदै
बोर्डबाहेक केही छैन नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा !
तरकारी बालीको संरक्षकमा किरा !
वि.सं. २०७५ फाल्गुन ०१ गते बुधबारको राशिफल